Fikarohana momba ny firaisana Nofinofy sy fahatsiarovana ny fiainana taloha-ET na fanahy mifandray aminy: ny tantaram-panahy Reincarnation an'i Belle Starr | Karen Pigott - Fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Mpikaroka: Karen Pigott
Nalazain'i Karen Pigott, natontan'i Walter Semkiw, MD
Belle Starr: Febroary 5, 1848-Febroary 3, 1889, Teraka tany Missouri
Karen Pigott-Teraka tany 1957 any Missouri
Karen Pigott's Renewing Childhood Dreams Dream of Being Shot A Horse
Karen dia mpitsabo nentim-paharazana izay miasa ao amin'ny tobim-pitsaboana mpiasan'ny hopitaly any Colorado. Niasa tao amin'ny efitrano fitsangatsanganana izy, ary koa ny rafitra fitsaboana hafa. Tamin'izaho ankizy dia nanomboka nanonofy ny fiainany taloha izy raha vehivavy noheverina.
Ny fahatsiarovan'i Karen ny fiainana taloha dia nomena etsy ambany, izay nitranga fony izy dimy taona, no zava-nitranga farany tamin'ny fiainan'i Belle Starr.
"Raha nitaingina teo amin'ny toerana nipetrahany teo anelanelan'ny kirihitr'ala aho dia nahare fientanam-po mafy ary tsapako fa ny fanaintainan'ny tebiteby dia namely ahy teo amin'ny tendroko ambony, ny tendako ary ny tarehiko. Nianjera tamin'ny tany aho ary nandry teo amin'ny tany maina. Teo am-pandriana aho ary niezaka ny nanangana ny tanako tamin'ny sandriko ary afaka nanandrana kely fotsiny aho ary raha vantany vao vita izany dia nisy fipoahana faharoa nipoaka tamiko. "
Tsy mahazatra ny zazavavy iray dimy taona mba hanana nofinofy miverimberina ao an-damosina, avy amin'ny soavaly iray. Tsy niezaka nanamarina ny fahatsiarovany i Karen mandra-pahatongan'ny 14 taona. Ao amin'ny fitantaràna izay manaraka, aorian'ny famaritana ny fahatsiarovana tsirairay, ny fanamarinana ny fahatsiarovana amin'ny alalan'ny fikarohana ara-tantara dia natolotra. Apetraho eo amin'ny fampitahana ny sary ny cursor anao mba hampitomboana sy ny fanalahidin'ny pôles mba hivezivezy eo amin'ilay sary lehibe,
Mariho fa ny tanjaky ny raharaha momba ny fanambadiana indray ao amin'ny vatana dia miorina amin'ny fahatsiarovam-peo lalina indrindra momba ny fiainany taloha izay noraisin'i Karen, tamin'ny fahazazany, tamin'ny alàlan'ny nofinofy, izay nekena ho ara-tantara. Nahatsiaro ireo fahatsiarovana maro ireo i Karen talohan'ny namakiany zavatra momba an'i Belle Starr.
Ny fahazazan'i Karen sy ny faniriany hianatra momba ny fiainana taloha tany Wild West
Karen dia nihalehibe tao Raytown, Missouri, faritra avaratr'i Kansas City. Tamin'ny 1967, fony sivy taona i Karen, dia nifindra tany Torrance, Kalifornia, ny fianakaviany, raha nanambady azy ny rainy, TRW. Tao 1972, fony i Xenum dia i Karen, dia niverina tany Missouri ny fianakaviany.
Tamin'ity fotoana ity, nanomboka namaky momba ny vehivavy i Karen tamin'ny fiezahana hamantatra ny fiainany taloha izay hitany tamin'ny nofiny. Noho izany, nanomboka nanandrana nanamarina ny fahatsiarovany 9 taona i Karen taorian'ny nanombohan'ny fahatsiarovany ny fiainany taloha. Manazava i Karen:
"Nandritra ny lohataona 1972, dia nanomboka nanjary liana lalandava kokoa tamin'ny vatana vaovao indray aho. Nahatsiaro ho toy ny nitari-dalana na nanosika ahy hanao zavatra aho, tsy fantatro. Nandeha tany amin'ny trano famakiam-boky ny reniko ary handeha boky amin'ny fiainana taloha aho. Nenjehina aho rehefa nikatsaka ny hahafantatra hoe iza aho taloha. Ny zavatra rehetra tsy maintsy vitako dia ny nofiko rehetra izay nananako momba ny Wild West.
Tonga saina aho androany fa tokony haka boky momba ny vehivavy ao amin'ny Wild West aho. Nieritreritra aho fa tsy tokony ho sarotra loatra ny hahita ity fiainana lasa teo ity, satria tsy nihevitra aho fa maro tamin'ireo vehivavy tao anatin'io vanim-potoana io dia notifirina tamin'ny soavaly iray, satria ny lehilahy dia tsy mitondra ny vehivavy tahaka izao.
Mba hitsitsiana fotoana dia nanapa-kevitra ny hamaky fotsiny ireo pejy vitsivitsy farany tamin'ireto boky ireto aho hijerena ny fahafatesan'ireto vehivavy ireto. Namaky momba ny Calamity Jane, Cattle Kate, Big-Nose Kate, Belle Boyd, Little Britches, Cattle Annie ary Belle Starr aho. ”
Belle Starr dia voatifitra tany ambadiky ny soavaly: sehatra avy amin'ny nofinofin'i Karen taloha
"Rehefa namaky ny nitifirana an'i Belle Starr tamin'ny soavaliny aho dia faly, saika hysterical. Tsy mbola nahare momba an'i Belle Starr aho talohan'ity fotoana ity. Nihazakazaka nidina ny tohatra nankeny an-dakozia nandroan'i Neny aho. Hoy aho 'Neny fantatro hoe iza aho! Izaho no Belle Starr, efa naheno momba azy ve ianao? '
Namaly izy fa nanam-bintana izay nosoratany momba an'i Belle. Tsy mieritreritra aho tamin'izany fotoana izany fa nino ny reniko fa Belle Starr aho tamin'ny andro taloha, saingy tsy ela izy. Na ny anarana hoe Belle Starr aza dia efa zatra tamiko, toy ny mahazatra ahy amin'ny anarako. "
Ny tantaran'i Missouri sy ny ady an-trano Amerikana
Ireo hevitra ara-tantara izay hanampy ny mpamaky hahatakatra ny zava-nitranga tao amin'ny fiainan'i Belle Starr dia nahitana ny zava-misy tany Missouri nandritra ny Ady tany an-tananan'i Etazonia. Missouri dia sisintany eo anelanelan'ny Avaratra sy Atsimo, izay misy ny mpiara-miasa sy mpanohana ny Confederate roa tany Missouri. Ireo olom-pirenen'i Missouri dia nifanohitra tamin'ilay olana.
Rehefa nandresy ny Ady, na Avaratra, dia napetraka tamin'ireo sakain'ireo mpanohana ny sazy. Ankoatra izany, ny alahelon'ireo herisetra dia nifototra tamin'ny havana maty nandritra ny ady. Ny mpanohana ny Confederate, fa tsy ny fanekena ny sazy sy ny fitondrana Avaratra, dia naka aina heloka. Belle Starr sy ny olona manodidina azy dia tao anatin'io toby io.
Ny famonoana ny rahalahin'i Belle Starr dia namadika an'i Belle ho mpandika lalàna
Ny rahalahin'i Belle Starr, izay Bud no anarany, dia mpanohana ny Confederate ary nanompo izy Ny Raiders an'ny Quantrill, vondrona milisy mpiady. Miaramila ao amin'ny Antenimiera dia nanodidina ny trano iray tao Missouri, satria nigadra izy ary i Bud dia novonoina rehefa nanandrana nandositra.
Rehefa namoy ny ainy ny tafika sendika i Belle, dia lasa mpiray tsikombakomba amin'i Conférence i Belle ary nifankahafantatra tamin'ireo Confederate hafa izay nanjary nandika lalàna, toa an'i Jessie James sy Frank James, ary Ry rahalahy tanora, tarihan'i Cole Younger.
Amin'ity fampidiran-dresaka ity, ny fahatsiarovana ny fiainan'i Karen sy ny traikefa hafa dia hiseho amin'ny teniny manokana.
Ny fahazazana amin'ny fahazazana amin'ny maha-traikefa an-tsokosoko azy na amin'ny extraterrestrial amin'ny taona 5, 1963 ao Raytown (Kansas City), Missouri
"Efa 5 taona aho tamin'ny 1963. Nipetraka tany Raytown, Missouri izahay tamin'io fotoana io. Raytown dia tanàna ambanivohitra atsimon'i Kansas City, Missouri. Indray alina, i Rob, zokiko, dia te hampiseho ahy ny bokiny momba ny kintana, planeta, masoandro sy vahindanitra. Ny boky izay nasehony ahy dia boky sy firaketana combo. Ny fitantarana nataon'i Walter Cronkite dia nandeha niaraka tamin'ireo sary. Taorian'ny roa minitra dia nanontany i Rob raha te-hahita ny Big Dipper aho. Tsy nahafantatra aho hoe inona ny Big Dipper, fa nandeha teo am-baravarankely mba hahafahany manondro azy.
Rehefa nijery ny lanitra aho teo amin'ny lalana mankany amin'ny tranon'ny mpifanolo-bodirindrina aminay atsimo, dia nahita hazavana fotsy hoditra avy hatrany aho. Nihodina izy nivezivezy sy avy any an-koditra. Nandre feo malefaka malefaka aho ary nanontany ahy hoe: 'Mahita anay ve ianao?'
Nanomboka nikiakiaka sy nitomany aho. Henoko ilay feo niteny. Aza matahotra, fa tsy haninona anao izahay. Nilazako ny anadahiko mba handao azy io.
Tsy naheno ny feo izy na nahita ny hazavana. Nihazakazaka aho ary niafina teo am-pandriany saingy afaka nandre izany feo niteny tamiko hiverina eo am-baravarankely. Nolazaiko hoe 'Tsia, Tsia', na oviana na oviana, fa tamin'ny farany, niverina teny am-baravarankely aho satria mbola niteny foana ilay feo hoe 'miverena eo am-baravarankely, tsy hampalahelo anao izahay.'
Avy eo aho dia nandre izany feo nanontany hoe 'Iza no anaranao, ary firy taona ianao?' Ny zavatra manaraka tadidiko dia ny feon'ny reniko mihazakazaka ny tohatra mitabataba mba hampitsahatra ny ady.
Nilaza taminay ny anadahiko fa tsy miady isika ary 'matahotra an'i Big Kipper' i Karen. ' Nambarako tamin'ny reniko ny zavatra hitako. Tsapako fa nisy zavatra nampatahotra ahy ary nanolo-kevitra izy fa handeha ho eny an-tokotany izahay rehetra ary afaka manasongadina ny zavatra nampahatahotra ahy tany an-danitra.
Fotoana mazava sy mangatsiaka izany. Nivoaka daholo izahay rehetra, avy eo dia nanontany ny reniko raha mbola teo foana ny zavatra hitako, fa lasa izany. "
Antsoina an-tsarimihetsika mahery fihetsika na feo mahery i Karen: Mpangalatra amin'ny soavaly izy nandritra ny androm-piainany taloha
“Mino aho fa ny alina manaraka dia nanonofy hafahafa aho. Tao anatin'izany no nandrenesako izany feo mekanika izany nilaza tamiko fa efa niaina taloha aho ary mpangalatra soavaly aho. Tao anatin'ity nofy ity dia naseho ahy ny sarinà tovovavy iray manana volo mainty sy manao zipo lava.
Isaky ny avy nahita ny hazavana teny an-danitra aho dia nanana ireo karazam-nofoko. Notantarainy tamin'izany feo lahy izany. Toy ny hoe nampianarina zavatra aho. Tsaroako tamin'ny nofy iray ny feo nilaza tamiko fa:
'Ny vondrona iray izay rahalahinao dia iray izay nanambady anao tamin'ny fiainanao taloha.'
Mbola tsy naheno ilay teny hoe 'entity' aho taloha, fa hatramin'izao dia tadidiko fa io teny io no nampiasaina. Notantaraiko tamin'ny rahalahiko izany rehetra izany, saingy natahotra izy ary niangavy ny reniko mba tsy hiresaka momba ny fiainana taloha intsony aho. ”
Karen dia nanjary liana tamin'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ary nilaza tamin'ny reniny fa nifidy azy ho ray aman-dreny izy talohan'ny nahaterahany
"Tsy fantatry ny reniko izay holazaina amiko fa lasa liana tamin'ny famakiana boky momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray izy. Tsy nino an'io lohahevitra io izy raha tsy nanomboka nilaza taminy momba ny nofiko sy ny fiainana taloha. Tsaroany fa fony mbola zaza aho dia efa nilaza taminy fa nifidy ny ray aman-dreniko ho amin'ity fiainana ity aho ary manao izany daholo isika rehetra. ”
Karen dia manafina ny tenany avy amin'ny Fanahy Masina na mahery amin'ny fehezan-teny mifehy ny biby
“Tsy ela aho natahotra natory tao amin'ny efitranoko rehefa avy nanonofy hafahafa be dia be. Voagejan'ny 'nofy' aho. Isaky ny alina aho dia nivoaka teny amin'ny lalantsara rehefa natory sy nitomany ny rehetra. Natahotra be aho. Niangavy ny ray aman-dreniko aho mba hamela ahy hatory ao amin'ny efitranony. Nahazo alalana im-betsaka aho saingy leo an'izany ny ray aman-dreniko ary nasaina niverina tany amin'ny efitranoko aho.
Nanontaniako izy ireo hametraka ny fandriako ao ambadiky ny varavarako. Dia nosokafako ny varavarana ka nafenina ny fandriako. Nataoko teo amboniko avokoa ireo biby natolotro ahy ka tsy nisy olona hahafantatra ahy. Nanandrana ny hafenoan'ny vahiny aho. Ny rahalahiko hatramin'izao dia mahatsiaro rehefa natahotra ny Big Dipper aho. Nandritra ny taona maromaro dia nino aho fa ny Big Dipper dia lasa jiro lehibe iray eny amin'ny lanitra. "
Ny nofinofy sy fahatsiarovana an'i Karen taloha, tamin'ny taona 5 tamin'ny 1963, voatifitra tamin'ny soavaly ary novonoin'ny Tifitra basy.
'Tamin'izaho 5 taona teo ho eo, tamin'ny 1963, raha nipetraka tao Raytown, Missouri aho, dia nanonofy miverimberina izay nitifirana ahy avy tany aorian'ny soavaly. Ny nofy dia natomboka tamin'ny fomba mitovy ihany. Niaraka tamina lehilahy iray tany amin'ny trano fiompiana aho. Ny ampitso maraina dia nanao veloma izahay ary nandao ny varavarana aoriana izy ary lasa nandeha. Nijery azy nitaingina aho ary niverina teo amin'ilay lalana nahatongavantsika ny andro teo.
Rehefa avy nitaingina kely aho dia nahatsikaritra fa nanaraka an'ity lehilahy ity izay tokony handeha ho any an-tanàna aho. Nanontany tena aho hoe maninona no nanenjika ahy izy ary nanantena azy hanatona ahy hanazava ny zavatra nataony. Nanohy nanaraka ahy izy.
Nijanona tao amin'ny tranon'ny namana iray aho ary nody tany an-trano. Tsy nahita an'io lehilahy io aho fa mbola tsy nahatsiaro ho sahiran-tsaina azy. Farany dia nidina ny lalana mankany amin'ny renirano iray aho. Hitako teo an-joron'ny mason'io lehilahy io aho. Niafina tao ambadiky ny kirihitra izy saingy sarotra taminy ny niafina. Nanao akanjo marevaka izy, fotsy fantatro. Tsy fantatro raha tokony hiresaka aminy aho na mody hoe tsy nahita azy aho. Nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha azy aho ary tsy handray azy amim-pahamendrehana, fa tokony hanana izany. Hitako fa nisy fiaramanidina nanangona teo an-tsandriny.
Rehefa nitaingina ny toerana nijanonany tao ambadiky ny kirihitra aho, dia nahare fientanam-pihorohoroana ary nahatsapa fa nitebiteby be aho tamin'ny farany, teo amin'ny tendrony ambony sy ny tendako. Nianjera tamin'ny tany aho ary nandry teo amin'ny tany maina. Nandao ny vavoniko aho ary niezaka nanangana ny tanako tamin'ny sandriko ary afaka nanandrana kely fotsiny aho ary raha vantany vao vita izany dia nisy fipoahana faharoa avy amin'ny jiro nalefa tany amiko. Nianjera tamin'ny tany aho. Fantatro ilay lehilahy nitifitra ahy toy ny dadako Floyd tamin'ity fiainana ity. Tao amin'ny nofy, Indiana izy. "
Ny fanontanian'i Walter: “Impiry ianao no nanofy an'io? Tamin'ny androm-piainanao ankehitriny tamin'ny faha-5 taonanao, efa nipetraka manodidina soavaly ve ianao? Moa ve nifanitsy tamin'ny zava-nitranga hitanao tamin'ny fahitalavitra na henonao tamin'ny loharano hafa ilay nofy? ”
Valiny Karen: “Nanana an'ity nofinofiko ity aho fa hotifirina any an-damosin'ny soavaly manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 mandritra ny fahazazako. Tsy nanana soavaly manodidina ahy aho ankoatry ny zavatra ho hitako eny amin'ny toeram-piompiana raha mitondra fiara amin'ny arabe aho. Ity nofy ity dia tsy nifanaraka tamin'ny hetsika hitako tamin'ny fahitalavitra na henoko. ”
Ny fanontanian'i Walter: “Tao anaty nofy, nahatsapa fanaintainana ara-batana ve ianao rehefa nanana ilay nofy? Tamin'izaho 5 taona, nanao ahoana ny fihetsikao tamin'ity nofy ity? Nolazainao tamin'ny ray aman-dreninao momba izany ve? Raha izany dia nanao ahoana ny fihetsik'izy ireo? Ho afaka miresaka momba ireo nofinofinao tamin'ny fahazazana ireo ve ny ray aman-dreninao? ”
Valiny Karen: "Amin'ny fotoana misy ny fiantraikany dia hahatsapa fanaintainana vetivety aho fa haingana dia haingana ary lasa. Tsy azoko antoka ny fomba fihetsika amin'ny taona 5 amin'ity nofy ity. Nolazaiko tamin'ny ray aman-dreniko ny nofy tamin'ny voalohany, fa ny reniko kosa mora mandray kokoa. ”
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: "Tamin'ny fahavaratry ny 1972, fony aho 14 taona aho dia namaky ilay boky aho Belle Starr, mpanjanaka Bandit nataon'i Burton Rascoe. Tao amin'ny pejy 233-236, dia hitako ny fahafatesan'ny Belle Starr. Ny fahafatesany sy ireo tranga nitarika ny fahafatesany dia voaresaka ato amin'ity boky ity. Ny zava-drehetra nanonofy ahy ho voatifitry ny soavaly iray dia nosoratana ato amin'ity boky ity. "
Fanamarihana momba ny fampitahana sary: Ny endriky ny endrika dia mitovy kokoa raha toa ka nalaina toy izany ihany i Jim July Starr sy Dadatoa Floyd. Ao amin'ny sary naseho, Jim Jolay Starr dia nitazona ny lohany niverimberina, raha mbola kely kosa i Onkel Floyd.
Ny fandikan-tenin'i Karen ny fiainany taloha momba ny fahafatesan'ny nofy tamin'ny 5 taona: naseho ny fifandraisana taloha
"Avy amin'ilay boky dia takatro izao ny nofiko izay nananako fony aho 5 taona. Tsapako fa ilay nitifitra ahy, Jim July Starr, no dadatoako Floyd tamin'ny fahavelomako. Ny dadatoako Floyd sy Jim July Starr dia mitovy endrika amin'ny endrik'izy ireo. Jim dia Indiana Cherokee ary nanambady azy aho mba hahafahanay hipetraka amin'ny Territories Indiana, lavitra ny lalàna Missouri.
Afaka mamerina ny tsipiriany momba ilay nofinidy efa nisy hatrizay aho taloha, fony aho 5 taona. Nitsidika ny tranon'ny namako izaho sy Jim ary lasa izahay. Niverina tany an-tranonay tany amin'ny Faritanin'i Inda aho, fa i Jim tsy maintsy nandeha tany Fort Smith mba hiatrika fiampangana ho mpangalatra. Tao anatin'ny nofy, fony aho nody an-trano, dia tsapako avy hatrany fa nisy olona nanaraka ahy. Tsapako izao fa i Jim izany. Hafahafa izany, nieritreritra aho. Angamba dia niova hevitra izy ny handeha hankany Fort Smith.
Tsy nahatratra ahy velively izy fa nijanona lavitra tsy nihetsika. Nijanona teo amin'ny mpifanila vodirindrina amiko aho hafa mba hiresaka eny an-dalana ary mieritreritra aho fa io no nitaingenan'i Jim ahy. Nandao ny tranon'ny mpifanila trano tamiko aho ary nanohy ny diako. Saika tonga teo amoron'ny renirano aho rehefa voatifitra ny lamosiko sy ny tendako. Hitako fa i Jim.
Tsy nanakaiky ny dadako Floyd aho. Tsara kokoa noho ny rahalahiko izy. Nolazain'ny reniko tamiko fa tsy dia tia vehivavy loatra ny dadatoako, ary nanana fahatsapana mitovy taminy aho. Ny dadatoako Floyd dia ny antsasaky ny Indiana, raha nanonofy aho, nahita azy ho Cherokee feno herisetra. "
Ny fanontanian'i Walter: “Inona no nataonao rehefa namaky ity kaonty ity ianao? Nanao ahoana ny fihetsiky ny ray aman-dreninao? ”
Valiny Karen: "Tsy te hihevitra aho fa ilay lehilahy tao anatin'io nofy io dia ny dadako Floyd. Tsy afaka niraharaha ny fitoviana aho, tsy momba ny endrika fotsiny fa ny fomba nijoroany. Toy izany koa ny fomba fiasa. Rehefa namaky momba an'i Jim July Starr aho dia nahatsikaritra ihany koa fa ny fomba fiteny dia mitovy.
Voasoratra fa rehefa nikasa ny hamono ny vadiny i Jim Julie, dia nila nindrana basy izy. Nindrana basy avy amin'ny zanaky ny mpamboly iray izy. Jim July Starr dia nilaza taminy fa mila mividy amboadia izay namono ny zanany izy. Ny dadatoako dia nilaza teny toy izao.
Tao anatin'ilay nofy dia nahatsikaritra aho fa ny fihetsika izay notontosan'i Jim July, fony izy nitodika ilay gnou, dia mitovy amin'ny an'ny dadatoako nanana fahazarana hitazonana. "
Ny nofinofin'i Karen taloha momba ny nofy sy fahatsiarovana azy, tamin'ny taona 12, ny fandevenana an'i Belle Starr niaraka tamin'ny mofo natsipy natsipy tao anaty vatam-paty
"Nanonofy tamin'ny 1970 aho, fony aho 12 taona ary raha niaina tany Torrance, California aho, izay nanampy tamin'ny antsipiriany tamin'ilay hetsika izay nosakanan'ny soaviko. Rehefa nandry teo amin'ilay vovoka aho rehefa notifirina, dia fantatro fa nitaingina haingana teo amin'ilay toerana nandriako aho rehefa notantarain'ny fahafatesako. Nijery azy avy any ambony aho nitaingina lalana iray ary niampita renirano iray.
Tao anatin'io nofinofiko io, dia nahita sehatra iray izay nanomanana ny fatiko halevina. Natao tao anaty vatam-paty aho ary natolotry ny olona hanaja azy. Ireo Indiana izay nanatrika ny fandevenana dia nanipy mofo katsaka tao anaty vatam-paty rehefa nandalo ny vatako izy ireo. Tsy tiako ny nahita izany ary nihevitra fa maloto izany.
Tao anatin'io nofy io aho dia tao amin'ny vatako indraindray ary tao anatin'izany ihany koa aho. Tsy fantatro hoe nahoana io. Angamba efa nieritreritra ny hiala aho? "
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: "Roa taona taty aoriana, fony aho 14 dia namaky ny bokin'i Glenn Shirley aho, Belle Starr sy ny Times, ny Literatiora, ny zava-misy, ary ny Legend, ary ao amin'ny pejy 240, dia voalaza ity tranga ity. Voalaza fa ny vahoaka Cherokee dia nametraka katsaka tao amin'ny vatan'i Belle, mifototra amin'ny fomba amam-panao Cherokee taloha. "
Fanontanin'i Walter: “Inona no nataonao rehefa namaky momba ny olona Cherokee nanipy mofo katsaka tao anaty vatam-paty Belle ianao?”
Valiny Karen: "Ny famakiana momba ny katsaka dia mihoatra noho ny mahavariana ahy. Tao amin'ny nofiko dia tsy tiako ny katsaka dia natsipy tao anaty vatam-paty, fa tsy afaka nanao na inona na inona aho. "
Ny nofinofin'i Karen taloha sy ny fitadidiany, tamin'ny faha-12 na faha-13 taonany, momba ireo miaramila mpiambina ny tafiky ny firaisana
"Nandeha an-tongotra teny ambanivohitra aho ary tonga teo amin'ny tranon'olona malaza iray niaraka tamin'ny miaramila sendikaly nandoko. Nitoetra nandritra ny alina niaraka tamin'ity fianakaviana ity aho. Nataoko ho niahiahy ny hijanona ela kokoa noho izay tokony hataoko aho ary ho sahiran-tsaina ny fianakaviako. Nataoko izany noho izany dia tsy niahiahy ahy ireo miaramila. Azoko lazaina ihany koa fa efa tara loatra aho vao nanomboka nody ary nila nijanona alina.
Tsapako fa ity fianakaviana ity dia ahitana mpanentana ny sendika, miaraka amin'ny tafika sendika mitoetra amin'izy ireo. Fantatro fa tena ilaina ny fampahalalam-baovao.
Niara-nisakafo tamin'ity fianakaviana ity sy ny vahiny aho. Noraisiko ny pianô ho azy ireo ary avy eo dia nandao ny trano ny tafika sendikaly. Irery aho tao amin'ity trano ity ary nijoro teo amin'ny tohatra ny fihainoana fifampiresahana teo ivelan'ny patriarika sy lehilahy miaramila. Tsapako fa niharan'ny loza ny rahalahiko, satria nitady azy ny tafika sendikaly.
Nijanona alina tao amin'ity trano ity aho. Ny ampitso maraina dia nitondra ny soavaliko aho ary raha mbola vonona ny hiala aho, dia nesoriko ny sampana misy kirihitra. Ny zanaky ny fianakaviana dia nijoro teo nijery ahy. Tsapako fa tsy natoky ahy ny fianakaviana. Rehefa nitaingina aho dia nanonona zavatra toy ny hoe 'hovonoiko.' Mieritreritra aho fa midika izany fa hokapohiko ao an-tanàna ny miaramila. (Nahatsikaritra aho fa vitsy kely loatra ny zanakavavy tamin'ny volo mainty).
Nihazakazaka haingana aho ary niparitaka tany anaty ala. Ny lalana dia nidina tao amin'ny fanariam-pako ary avy eo dia nihetsika mafy izy ary navoaka ankavanana. Tamin'ny fanesorana dia nanao raharaha sasantsasany ny tafika Konfedera. Nandehandeha moramora aho ary nalemy dia afaka niteny aho fa nomeko an'ireo lehilahy ireo ny toeran'ny trano misy ny tafi-panjakana. "
Ny fanontanian'i Walter: “Fa maninona ianao no mody fanahiana sao tara any aoriana? Ahoana no nahafantaranao fa ny tafika sendika dia miresaka momba ny rahalahinao, mifanohitra amin'ny olon-kafa? Nampiasa ny anaran'ny rahalahinao hatramin'ny fahavelony ve izy ireo? ”
Valiny Karen: "Tsy maintsy niahiahy aho ny hiahiahy ny hijanona amin'ny farany satria ny vehivavy dia tsy nanao izany karazana zavatra izany avy eo. Tsy te-hampiahiahy ihany koa aho.
Fantatro fa nitady ny rahalahiko ny tafika sendikaly satria nanao vivery ny ainy izy. Taorian'ny nilalaovako ny piano dia samy nisotro ronono nandritra ny alina. Lasa maizina izy io. Niomana ny handeha ambony am-pandriana aho raha naheno vahiny iray tsy hiresaka tamin'ny tompon-trano.
Nijoro tamin'ny tohatra fahatelo aho nihaino ary henoko voatonona ny anaran'ny rahalahiko. Notadiavin'ny tafika izy. Fantatro fa tsy maintsy mody aloha aho mba hahafahako mampitandrina azy. Izaho sy ny anadahiko dia fantatry ny be any. ”
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen an'ny nofiny: Herintaona na roa taorian'io nofy io, tao amin'ilay boky Belle Starr an'i Rascoe, Ny fiaramanidin'i Belle mba hamonjena ny anadahin'i Bud dia nofaritana tamin'ny an-tsipiriany. Ity fiaramanidina ity koa dia voalaza ao Belle Starr avy amin'i Glenn Shirley, pejy 49-51.
Ny nofinofin'i Karen taloha sy ny fitadidiany tamin'ny 1971 nahazo ny vatan'ny anadahiny sy ireo miaramila sendikaly
"Nanonofy aho fony aho 13 taona, izay niaraka tamin'ny raiko mba haka ny vatan-tenan'ny rahalahiko. Ny fiarandalamby dia tsy nanana rakotra. Nanana ny eritreritro aho buckboard teo aloha.
Niditra tao an-trano niaraka tamin'ny raiko aho mba hambenan'ny vatan'ny rahalahiko. Nentinay ny entany voalohany izay nampiditra ny basy. Nipetraka tao anaty fiara aho raha nandeha ny vatako ny raiko.
Nisy ireo trozona sendikaly nandrakotra ny filazana zavatra mahasosotra momba ny rahalahiko ary ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra dia nitodika tany amiko. Nalaiko ny basy-n'ny rahalahiko ary nanondro azy teo amin'ny andaniny, saingy nihomehy ahy izy ireo.
Nandritra ny dia nody tany an-trano dia tezitra be momba ity tranga ity ny raiko. Nilaza izy fa tokony ho nitazona ny hafaliako aho ary tsy tokony hampifantoka ny fifantohana amin'ny fianakaviako. Tsy te hijery ny làlan-dry zareo aho ary nibanjina ny sisiny. Andro mafana sy malefaka izany. "
Ny fanontanian'i Walter: "Ahoana no nahafantaranao fa dadan'i Belle io tamin'ny nofy?"
Valiny Karen: “Fantatro ho toy ny raiko izy satria nanana ny fifandraisana nitovy taminay teto amin'ity fiainana ity. Lehiben'ny fahefana amiko izy. Nanana nofy fohy ihany koa aho tamin'ny mbola kely (amin'ity fiainana ity) izay teo ivelan'ny tranobe kely. Tao ny reniko ary nanosotra ny volony izy. Nanontany azy foana aho hoe aiza ny dadako. Avy eo ny raiko dia nivoaka nankany amin'ny fanadiovana ho any amin'ny tranonay. Nandeha lavitra izy. Nolazaina tamiko fa tsy maintsy mankany an-drenivohitra izy. Heveriko fa midika ho renivohitr'i Missouri izany. Toa izany ihany ny raiko. Mitovy amin'ny an'ny raiko izy. ”
Fanontanin'i Walter: "Ahoana no ahalalanao fa ny dadan'i Belle dia tonga nofo indray amin'ny maha-rainao azy."
Valiny Karen: “Ny dadan'i Belle tao anaty nofy dia nanana ny fomba fanaon'ny raiko, fomba firesaka sy fanehoana ny masony izay nahatonga ahy hifanerasera. Tao amin'ny nofy dia nanana vatam-batana mitovy amin'ny nataony teto amin'ity fiainana ity izy. ”
Fanontanin'i Walter: “Ahoana no nahafantaranao fa rahalahin'i Belle tao anaty nofy izy io?”
Valiny Karen: “Tadidiko ny fihetseham-po tao amin'ilay nofy sy ny fanahiana avy tamin'ny ray aman-dreniko. Tsikaritro ny fihetsiky ny ray aman-dreny sy ny fihetseham-poko. Nahatsapa ho toy ny namoy havana akaiky aho ary tadidiko tao anaty nofy fa ilay olona dia antsoina hoe zanakalahy / anadahy. ”
Fanontanin'i Walter: “Fantatrao ve hoe iza ny rahalahin'i Belle amin'ny fiainanao ankehitriny?”
Valiny Karen: “Ny rahalahiko tamin'ny fahaveloman'ny Belle dia toa ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko Steve. Tena akaiky izahay tamin'ny andron'i Belle. ”
Fanontanin'i Walter: “Fantatrao ve ny tantaran'ny Belle talohan'ity nofinofy ity?”
Valiny Karen: “Tsy nahalala na inona na inona momba an'io aho talohan'ilay nofy. Tsy fantatro hoe iza i Belle Starr. ”
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: “Herintaona na roa taty aoriana, tamin'izaho 14 taona, raha namaky ilay boky tamin'ny Belle Starr an'i Rascoe Tsapako fa ny fisehoan-javatra tamin'ny nofinofy, ny fanangonana ny vatan-drahalahy iray, noho ny fanenjehana ny tafiky ny sendikaly teo aloha, dia tonga tany Belle Starr. Belle dia nandeha niaraka tamin-drainy mba handray ny fatin'i Bud Bud. "
Ny hevitr'i Walter: Tena mahavariana tokoa fa amin'ny maha-ankizy anao dia manana fahatsiarovana an-tsipiriany izay mifanaraka tanteraka amin'ny fiainan'i Belle Starr.
Ny nofinofin'i Karen taloha sy ny fitadidiany, tamin'ny faha-14 taonany, fakana sary misy sarina basy sy basy
"Taorian'ny fahafatesan'ny anadahiko, dia nankany amin'ny tanàna iray niaraka tamin'ny reniko aho mba hividy. Nataoko ny holatra sy ny basy. Nanao izany aho mba handefa hafatra ho an'ny tafika ao amin'ny Antenimiera fa tiako ny hamaly faty noho ny fahafatesany. Ny reniko dia tsy tiako hitafy azy ireo satria tsapany fa 'nangataka olana fotsiny aho.'
Mba hampisehoako ny maha-zava-dehibe ny valifaty, dia noraisiko ny sary nataoko tamin'ny pistola. Ny reniko dia miala eo an-damosiny mijery ny sary fitifirana. Tsy dia faly tamiko izy. Mijery ny zoko marina ato amin'ity sary ity aho satria nahatsapa fa mijery mivantana eo amin'ny fakantsary dia mety henjana loatra. "
Ny fanontanian'i Walter: “Ahoana no nahafantaranao fa ny reninao ilay olona tao anaty nofy? Voamarina ara-tantara ve izany tranga izany? ”
Valiny Karen: “Hahafantatra ny reniko aho na aiza na aiza. Azonao atao ny manakimpy ahy, esory ny henoko ary atsangano amin'ny efitrano akaikiny aho dia ho fantatro. Tena akaiky izahay. Namaky aho fa ny andro taorian'ny namonoana ny rahalahin'i Belle dia niditra tao amin'ny tanàna iray tsy lavitra i Belle sy ny reniny. Mihevitra aho fa nitafy fehikibo i Belle, saingy mbola tsy namaky mihitsy aho fa niaraka tamin'ny reniny tao amin'ny studio photo ny reniny. ”
Fahatsiarovana ny fiainana taloha an'i Karen, tamin'ny faha-14 taonan'ny 1972, nikatona tao amin'ny trano fidiovana, niaraka tamin'ny famonjena romantika
“Nipetraka tao anaty lalimoara aho, toa voahidy tao noho ny sazy. Taty aoriana, rehefa navoaka ny efi-tranoko aho ary nipetraka tao amin'ny efitranoko, dia nahatsikaritra aho fa misy olona miakatra tohatra. Eo ny lehilahy haka ahy. Maizina any ivelany. Nihanika aho ary nahita fa misy soavaly miandry ahy toy ny olona maro hafa. Ilay lehilahy nianika ny tohatra tsapako fa rahalahiko amin'ity fiainana ity. ”
Fanamarihana momba ny fampitahana sary: Ny fisehoan'ny endrika dia toa mitovy kokoa raha toa ka voasambotra tamin'io toerana io ihany i Jim Reed sy Rob. Misy fitoviana voamarika eo amin'ny maso.
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen: Ity tranga ity dia voafaritra ao Belle Starr, nataon'i Burton Roscoe, pejy 121 ary pejy 156. Rehefa avy namaky ity boky ity aho dia nahalala bebe kokoa momba ity nofy ity:
"Bevohoka i Belle talohan'ny fanambadiana. Nofiko tokoa ny hanana an'ity zaza ity. Cole Younger ny raim-pianakaviana, saingy nolaviny foana izany ary nolaviny ny fahafantarana an'i Belle Starr. Naratra i Belle (izaho). Nihaona amina mpandika lalàna iray hafa izay fantatro hoe Jim Reed avy any Reed Hill Missouri. Te hanambady ahy izy. Fantany fa manan-janaka niteraka an'i Cole aho saingy nilaza i Jim fa te hanampy ahy sy hanome anarana farany an'ilay zaza. Tonga namangy ahy sy ilay zaza i Jim. Nipetraka tao amin'ny efitrano malalaky ny trano aho ary niandry ny hahatongavany. Niditra izy ary nanolotra ahy. Nilaza aho fa hanao izany nefa tsy fantatro hoe rahoviana.
Noho ny antony tsy fantatro, ny ray aman-dreniko (Belle's) nankahala an'i Jim Reed ary nanidy ahy tao amin'ny efitranony izy ireo mba tsy ho hitako. Farany dia navelan'ny ray aman-dreniko nivoaka ny efitranony.
Maizina ny tany ivelany raha nahare olona niantso ny anarako. Nijery aho ary i Jim Reed, izay nametraka tohatra teo am-baravarankely. Tonga hiaraka amiko izy. Raha vantany vao nidina ny tohatra izahay dia nihazakazaka nankany amin'ny soavalinay ary nitaingina lalana fohy. Andian-dehilahy izay naman'i Jim no miandry. Nivady tao izahay avy amin'ilay mpitarika ity andian-dalàna ity. Mpitory ity lehilahy ity talohan'ny nahalany lalàna.
Jim Reed, ilay lehilahy nanambady ahy, dia ny rahalahiko, Rob, tamin'ny andro ankehitriny. Tadidio fa tamin'ny zavatra niainako tamin'ny 'hazavana mamirapiratra', fony aho 5 taona, ny feo lahy mekanika dia nilaza tamiko fa ny rahalahiko dia vadiko taloha. Ilay feo dia miresaka momba ny fiainan'ny rahalahiko taloha hoe Jim Reed. ”
Ny nofinofin'i Karen taloha sy ny fitadidiany, tamin'ny faha-14 taonany, nandroba trano
"Nanana nofinofiko ny rahalahiko nandritra ny androm-piainany amin'izao fotoana izao, Rob, izaho sy ny tovolahy iray hafa dia niakatra teo ambonin'ny tany na ny fiakaran'ny tany nijery tany an-trano. Mazava ho ahy fa handrava ity trano ity izahay. Izaho no ilay niakatra niakatra teo am-baravarana ka nandondòna tao. Toy ny nataoko ireo roa ireo no nanery ahy hiditra tao. Nanao akanjom-behivavy aho mba tsy hisy hahafantatra ny maha izaho ahy. Nampijaly anay ity lehilahy ity mba hanome anay ny volamena. Niaina izy ary nandeha tany amin'ny fitsarana izahay rehetra saingy tsy nahay namantatra ireo lehilahy ireo. "
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: "Bokin'i Burton Rascoe, pejy 172. I Jim Reed sy i Belle Star dia nandroba lehilahy iray araka ny nofaritan'ny nofy. ”
Ny nofinofin'i Karen taloha momba ny fiainany sy ny fitadidiany ny vatam-paty vadiny ary ny tsy fankatoavana ny lalàna
“Miakatra amin'ny trano mitazona ny zanako vavy aho rehefa mandeha. Afatory ny soavaly eo am-pijerena ilay trano. Fantatro fa azo jerena aho. Tsy te hiditra amin'ny trano aho fa tsy maintsy. Rehefa mandeha miaraka amin'ny zanako vavy aho dia nahita lehilahy 4-5 teo ho eo nijoro nanodidina ny vatam-paty napetraka teo afovoan'ny efitrano. Angatahina aho hanoratra ny vatan'ny tena ho vadiko, saingy mandainga aho ary milaza fa tsy izy io. Tsapako fa diso fanantenana tanteraka ireo lehilahy ireo. Niala tamin'ny zanako vavy aho fa voamarina. ”
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: "Scott, Belle Starr ao Velvet, pejy 82-83. Rehefa notifirina sy maty i Jim Reed dia tsy maintsy namantatra ny vatana i Belle. Raha afaka nanao izany aho (Belle) dia hahazo ny valisoa ireo mpamono. Tsy tiako raha hitranga izany ka nandeha niditra aho ary nilaza fa tsy i Jim ilay maty, fa tena nandainga teo izy.
Ny boky sasany momba ny raharahan'i Belle dia milaza fa azo inoana fa tsy nitranga izany, saingy fantatro fa tsy izany. ”
Ny nofinofin'i Karen taloha momba ny fiainany sy ny fitadidiany ny zanakalahin'i Belle mitaingina ny soavaliny mafy loatra ary manome kapoka an'i Eddie
"Mihazakazaka mankany amin'ny soavaly aho ary hitako fa nitaingina soavaly ny soavaly. Tonga dia miditra ao anaty trano aho ary mahita ny zanako lahy matory any. Tsy sambatra aho fa nalainy ny alina talohan'io ary nivezivezy izany. "
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: "Belle Starr, nataon'i Burton Roscoe ary Belle Starr avy amin'i Glenn Shirley. Belle dia tsy nifanaraka tamin'ny zanany lahy Eddie izay niteraka an'i Jim Reed. Belle dia nanome kapoka mafy an'i Eddie niaraka tamin'ny voly mitaingina taorinan'ny nitondrany ilay soavaly mainty sarobidy hitondrany azy any amin'ny fety any amin'ny tanàna akaiky azy. Nitaingina mafy azy io ary nony maraina dia hitan'i Belle fa natory tao am-bala i Ed. Ed tsy namela velively an'i Belle tamin'ny karavasy. Nofinofy izany ho ahy, nahatsiravina izany. ”
Fanontanin'i Walter: Fantatrao ve hoe iza i Eddie Reed amin'izao fotoana izao?
Valiny Karen: Azoko antoka fa i Eddie dia niorina indray tamin'ny naha zanako lahy, Mike Jr.
Ny nofinofin'i Karen taloha sy ny fitadidiany, tamin'ny faha-13 taonany & talohan'ny namakiany momba an'i Belle Starr, an'ny vadiny nitifitra lehilahy
“Tao an-trano aho niaraka tamin'ny lehilahy izay heveriko fa vadiko tamin'izany fiainana izany. Reko ny mandondona am-baravarana ary valiako ny varavarana. Rehefa manokatra aho ka mahita ilay olona mijoro eo dia manomboka mitsiky aho, nefa avy eo namoaka ny basiny ny vadiko ary nandrehitra ilay lehilahy, namono azy. Tena sosotra aho ary mijery ny vadiko sy ny tananà mpiompy mitondra ilay lehilahy maty ho any an-tokotany akaikin'ny trano. Izy rehetra dia mijoro manodidina azy amin'ny faribolana. Mandeha aho ary mametraka lasely ny soavaliko satria tsy te-ho eo aho, dia mila mivoaka. Nandalo ny lehilahy rehetra aho ary nibanjina ny vadiko. ”
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny: “Taorian'ny nofy dia namaky tantara iray momba an'io aho. Tsy hitako izay misy azy.
Fantatro fa nitranga izany. Tsy fantatro ny antony namonoana ity lehilahy ity. Belle dia nipetraka niaraka tamin'i Sam Starr vadiny faharoa, raha indray andro dia nisy olona tonga teo am-baravarana. Rehefa nosokafako (Belle) ny varavarana dia namoaka basy poleta i Sam ary nitifitra ilay mpitsidika. Tsy fantatro ny antony nanaovany an'izany. Sam sy ny andian'olon-dratsy izay nijanona tao amin'ny toeram-piompianay dia naka ny faty ary nandevina azy tsy lavitra ny tranonay. Nohazavaina fa tsy hisy hieritreritra mitady faty any. Araka ny voalaza dia tena nahalala zavatra momba azy nitifitra namako aho ary nihazakazaka nandingana ireo andian-dehilahy hanatona ny soavaliko. Nametraka lasely aho ary nitaingina ny ekipa ary rehefa nanao izany aho dia nibanjina an'i Sam. ”
Fanamarihana: Sam Starr dia sary an-kavanana.
Ny nofinofin'i Karen taloha & Fahatsiarovana ny fanapahana ny fifandraisan'i Voahangy amin'ny mpitia
“Ny zanakavavin'i Belle, Pearl, dia nanana sakaiza tsy nankasitrahan'i Belle. Belle dia tsy naniry an'i Pearl hanambady ny sakaizany satria tsy nanana vola ampy hanohanana azy izy. Mba handravana ny fifandraisana dia nandefa an'i Pearl tany ivelan'ny tanàna i Belle, tsy fantany fa bevohoka an'ity lehilahy ity i Pearl.
Raha mbola teo izy dia nanoratra taratasy ho an'ilay sipa i Belle izay noraisiny ho Pearl. Ao amin'ny taratasy, nanoratra izy fa nanambady lehilahy iray tamim-bola tahaka ny tadiavin'ny mama. Lainga izay niasa. Ilay lehilahy dia nanambady vehivavy hafa raha tsy tao an-tanàna i Pearl.
Rehefa niverina i Pearl ary nahita ny sipany taloha dia fantany ny tetika maloto nataon'i Belle. Tao anatin'ny nofiko, ny namana akaiky iray amin'ny fianakaviana dia nahafantatra ny toe-pahasalaman'i Pearl ary nilaza izany tamin'i Belle. Tsy nahalala na inona na inona momba izany i Belle ary lasa tezitra izy. Ity sakaiza akaiky ny fianakaviana ity dia mpitam-paositra tao an-tanàna ary efa toy ny raiben'i Pearl. Tsy nahazatra azy ny nitokisany. Rehefa fantatro (Belle) fa bevohoka i Voahangy; Nandeha ballistic aho ary tamin'ny voalohany dia nanome tsiny ny tomponandraikitra paositra fa izy no tompon'andraikitra tamin'ny toe-pahasalaman'i Pearl. ”
Valim-pikarohana ara-tantara: Zahao etsy ambany
Ny nofinofin'i Karen taloha sy ny nofinofy nilalao hatsikana tamin'ny Voahangy
“Miresaka amin'ny mpifanila vodirindrina amiko izay namako akaiky aho. Nandritra ny resaka nifanaovanay, ny zanako vavy sy ny sakaizany dia nihazakazaka taminay nihomehy sy nifalifaly Manodidina ny Halloween izany. Lazaiko amin'ity mpiara-monina ity fa mikasa ny hanao filokana amin'ny zanako vavy aho.
Matotra izy ary manontany ahy raha mieritreritra aho fa mety izany satria i Pearl dia amin'ny 'fomba marefo.' Gaga aho fa tsy fantatro izay tena tiany holazaina. Rehefa tsapako fa bevohoka izy, dia avy hatrany dia naneho hatezerana ary namela azy hanana izany. Avy eo dia manenjika ny zanako vavy aho. ”
Fanontanin'i Walter: Ny bevohoka ve ao Pearl sy ny akohon'i Belle dia manaisotra ilay ankizilahy voarakitra an-tsoratra ao amin'ny tantara?
Valiny Karen: "Eny. Rehefa nanana an'io nofinofiko io aho dia tsy fantatro hoe inona izany. Ny zavatra iray mampiavaka ireo nofinofy ireo amin'ny nofy hafa dia ny fihetsem-po tafiditra ao. Mihalehibe ny fihetsem-po. Ho an'ity nofy ity dia nanofy aho niresaka tamin'ny mpifanila trano tamiko ary avy eo nilaza zavatra izay mampiala ahy fotsiny aho. Mandeha aho milaza amin'ny zanako vavy fa fantatro ny zava-drehetra. Miaina alahelo sy fahaketrahana aho amin'ity nofy ity. ”
Valim-pikarohana ara-tantara: mbola miandry
Ny nofinofy sy fahatsiarovana an'i Karen taloha, tamin'ny taona 12-13 taona, mpaka sary Alemanina
"Nandeha an-tongotra nankany amin'ny tanàna aho niaraka tamin'ny sheriff lefitra iray mba hamaly ny fiampangan'ny soavaly iray. Mitaingina mpivarotra sy sangisangy miaraka amin'ny sheriff aho mba te hiditra ao amin'ny mpivarotra vitsivitsy mba hividy. Manontany azy aho raha tiany ny miandry ahy. Lazao aminy ihany koa fa reraka be ny sainy rehetra azoko isaky ny tonga any an-tanàna. Rehefa mandehandeha mankany an-tanàna aho dia mahita lehilahy iray mendri-pirazanana mankany amin'ny hodiako havia mba haka sary aho. Manana fakantsary efa tranainy izy amin'ny satroka. Lazao aminy fa hijanona tsy hody aho.
Eo am-pijereko dia hitako ilay zazalahy kely miaraka amin'ny alemana mampihetsi-po amin'ny zoko marina mialoha ny hiantso ahy haka ny sariko. Lazao aminy fa nanova ny eritreritro aho ary tsy tiako ilay sary nalaina. Namaly izy hoe 'Nampanantenainao'.
Manohy mangataka ahy izy hanova ny saiko. Mijery azy ihany aho amin'ny farany rehefa mijanona ny soavaliko. Navelako izy haka ny sary, fa mihetsika miaraka amin'ny tsiky aho, ary avy eo manohy mitaingina. Koa satria tena tsy te ho nalaina sary aho, dia tsy te hitsiky taminy aho, ka izany no anton'ilay tsiky. ”
Fanamarinana ara-tantara an'i Karen an'ny nofiny: “Ity dia sary malaza asongadin'i Rhoeder's Gallery ao Fort Smith. Ity sary ity dia asongadin'ny boky nosoratan'i Glenn Shirley, pejy 196. Nitranga izany nofinofy izany alohan'ny namakiako ny momba an'i Belle Starr ”
Ny nofinofisin'i Karen taloha sy ny fitadidiany, tamin'ny faha-14 taonany, naka sary niaraka tamin'i Bebe Blue
“Nasaina naka sary tamin'ny olona tsy fantatro aho. Ity lehilahy ity dia tovolahy iray izay sahirana tamin'ny lalàna. Sahirana amin'ny lalàna koa aho ary izany no antony nahatongavanay 2 lahy tany amin'ny biraon'ny sheriff. 'Duck Blue' no anaran'ity lehilahy ity. Manaiky aho haka ny sariko ary mijoro eo fotsiny aho. Tsy faly amin'ny akanjo anaovako aho satria mieritreritra ny mahatonga ny endrik'ilay soratra kely ho lehibe. ”Fanamarinana ara-tantara an'i Karen momba ny nofiny:“ Ity sary ity dia aseho amin'ny boky Glenn Shirley ao amin'ny pejy 197. ”
Karen's Plea tamin'ny Jona 18, 1974, ao amin'ny Age 16, mba hihaona amin'ny fiainany taloha, Cole Younger, tamin'ny vanim-potoana ankehitriny
"Araka ny nomarihina, tamin'izaho 14 taona, nanomboka nanomboka namaky momba an'i Belle Starr aho ary nanjary nino fa izaho no efa taloha. Tamin'ny faha-16 taonako dia efa namaky zavatra betsaka momba an'i Belle aho. Nanaitra ahy ny zava-misy iray tamin'ny tantaran'i Belle ary izany no nitiavany an'i Cole Younger. Tamin'izaho 16-17 taona teo ho eo dia nilaza tamin'ny feo mafy aho hoe: 'Raha tena tia an'io lehilahy io i Belle tamin'izany andro izany dia mba avelao aho hahita azy eto amin'ity fiainana ity.' ”
Karen dia nihaona tamin'ny Fiainam-pitiavana niainany tany am-piandohana, ny Reincarnated Cole Younger, tamin'ny vanim-potoanan'ny 19
"Rehefa nahita ny vadiko, Mike aho, dia voasarika ho azy aho. Nijery azy tsara izy. Nihaona tamin'ny 1977 izahay tamin'ny fotoana niarahanay niasa tao amin'ny fivarotana Broadway tao Torrance, California. Nandeha an-tongotra teo akaikiko izy teo am-piandohan'ny fiovanay. Nihaona taminy indray aho herinandro vitsivitsy taty aoriana tany Hermosa Beach, izay nisy vondron'olona iray tao amin'ny fivarotana nilalao baolina baolina alahady alahady. Nahita azy aho tamin'ny andro nahaterahany 2st. Azoko antoka fa voatendry hihaona izahay. Nanamarika mihitsy aza izahay taoriana kelin'ny nifanarahana fa toa niara-niaina mandrakizay izahay. "
Ny nofin'i Karen taloha momba ny nofy sy fahatsiarovana, tamin'ny taona 23 tamin'ny 1981, ny fitiavan'i Belle Starr an'i Cole Younger ary nolavina
"Amin'ny nofiko, mijery lehilahy vitsivitsy aho izay nitsidika ny fianakaviako ho vonona hiala. Mipetraka amin'ny soavaly izy ireo ary miresaka amin'ny ray aman-dreniko. Nalaiko be ilay lehilahy tranainy indrindra. Mipetraka eo ambony soavaly akaiky ahy izy. Mibitsibitsika zavatra aminy aho saingy tsy manao zavatra mahaliana ahy izy. Mamaly ahy amin'ny feo malefaka izy ary tsy faly amin'ny zavatra lazainy amiko aho. Sahiran-tsaina aho satria naheno azy koa ny ray aman-dreniko.
Tsikaritro fa manao akanjo lava tandrefana izy; pataloha, akanjo, satroka koboy ary baoty. Ny feony dia manana lantom-peony afovoany Andrefana. Tsapako fa ny vadiko, Mike, amin'ny fiainako ankehitriny ary tiako be izy. Tsy dia tiako loatra izy amin'ity nofy ity. Izany nofy izany dia nitranga taorian'ny nivadianay tamin'ny 1981 ary nipetraka tao amin'ny trano fonenanay voalohany izahay. ”
Valim-pikarohana ara-tantara: Nanazava ny nofiko aho rehefa namaky boky momba an'i Belle. Ny lehilahy mitsidika ny fianakaviako dia ireo rahalahy tanora. Heveriko fa ny James Boys dia nisy koa. Ilay olona nankafiziko Cole Younger. Nihetsi-po izahay ary lasa bevohoka ny vadiko (Belle). I Cole no ray, saingy nandà izy avy eo fa nanana tovovavy izahay.
Tao amin'ny nofy, dia ireo mpitaingin-tsoavaly no nitaingin-tsoavaly ary ny ray aman-dreniko dia nivoaka nankeo amin'izy ireo mba hanao veloma. Nandrahona ahy ny hijanona ao an-trano ireo ray aman-dreniko ary tsy nivoaka, satria tsy tiany aho hanao veloma. Nipetraka tao an-trano aho ary nijery ny zava-drehetra teo am-baravarankely. Lehilahy iray zokiolona no nibanjina ahy ka tsy nety nivoaka. Tsy fantatro hoe iza io lehilahy io, fa heveriko fa havana izy. Na izany na tsy izany dia nihazakazaka nankany amin'izy ireo aho ary nandeha nivantana tany Cole ary nilaza tamim-panajana.
Cole Younger & Belle Starr mahazo tantaram-pitiavana amin'ity indray mitoraka ity
“Amin'ny androm-piainantsika ankehitriny, Mike (Cole) dia mitondra ahy toy ny andriambavy ary tiany ho ahy ny toetrako. Manana fanambadiana mahafinaritra izahay ary efa 29 taona no nanambadiana. Heveriko fa azontsika tamin'ny farany izany tamin'ity indray mitoraka ity.
Tamin'ny 1981, rehefa nanana an'io nofinofiko io aho izay nahatsapako fa i Mike no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Cole Younger, dia tsy nilaza izany taminy aho. Tsy azoko antoka hoe inona no havaliny. 23 taona indray aho, rehefa hitako fa i Cole i Mike, efa-taona taorian'ny nihaonanay. ”
Karen dia nanambara tamin'i Mike fa Belle Starr izy nandritra ny androm-piainany taloha ary izy no Cole Younger
Fito taona taty aoriana, tao amin'ny 1988, indray maraina dia niresaka tamin'i Mike aho momba ny zavatra inoako momba ny vatana vaovao. Noheveriko fa heveriny fa adala na zavatra aho saingy tsy nihaino izy. Nolazaiko azy ny momba ny fahitana fa nofinofy tamin'ny nofinofy roa ny nofiko taloha ary ny mahatsikaiky ho ahy.
Nolazaiko azy fa Belle Starr aho tamin'ny lasa, toy ny nofinofiko izay naneho ny zava-nisy nandritra ny androm-piainany. Nolazaiko azy koa fa mieritreritra aho hoe fantatro hoe iza izy, saingy tsy nampahafantariko izay noheveriko fa tamin'io fotoana io izy.
Gaga aho hoe ohatrinona ny toa an'i Cole Younger. Na ny rahalahiny roa aza dia mitovy amin'ny an'ireo rahalahiny roa. Ny rahalahy rehetra dia tena liana amin'ny tantaran'ny ady an-trano ary efa niaina kilaometatra maromaro tao Gettysburg, Pennsylvania izy ireo.
Araka ny voalaza dia nolazaiko azy tao amin'ny 1988 fa nieritreritra aho fa i Belle Starr aho ary mety ho vazivazy vetivety momba azy io. Nolazaiko tamin'ny farany an'i Mike fa izaho dia i Cole Younger tamin'ny andro niainany nandritra ny taona 2000. Fantany ny zavatra inoako, saingy tsy azoko mihitsy ny zavatra eritreretiny momba izany rehetra izany tamin'ny taona 2000.
Amin'izao fotoana izao, mino aho izao fa mino izy, raha ny marina, mino fa izaho dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Belle Starr. Mike, rahateo, dia mpitsabo mpanampy iray ao amin'ny Unité Intensive Care Unit (ICU), izay mpitarika voajanahary. ”
Tamin'ny faha-42 taonany, tamin'ny 2000, nahazo palpitations i Karen tao amin'ny toerana niainana taloha izay nonenan'i Belle Starr & nivarotana
'Tamin'ny fahavaratry ny 2000, dia niverina nankany Missouri izahay mianakavy. Nandeha fiara avy tany Kalifornia atsimo izahay. Teny an-dàlana dia namakivaky an'i Oklahoma izahay ary nijanona tao amin'ny hotely Lake Eufaula. Efa ela ny hotely / resort ary tsy navaozina nanomboka tamin'ny 70. Mafana sy mando izany.
Fantatry ny vadiko ny anton'ny antony tiako hizaran'izany faritra izany saingy tsy fantatro ireo zanako. Nandehandeha manodidina ny farihy izahay ary nankany amin'ny tohodrano. Mazava ny lalana, betsaka ny olona amin'ny sambo sy ny rano.
Rehefa nandalo ny tohodrano nandalo tany atsinanana izahay, dia nanomboka nihetsi-po sy lozabe aho. Nihanatahotra ny foko ary nahatsapa ho nibitsibitsika aho. Izany rehetra izany dia niaina tany amin'ny faritra iray amin'ny làlambe. Nolazaiko tamin'ny vadiko fa tsara aho ary tsy te handeha intsony satria tsy te hijanona.
Fanontanin'i Walter: Misy antony ve ny fiainan'i Belle izay mety hahatsapa hafanam-po, hazavana, sns ..., amin'io toerana io? Nitsidika an'i Belle ve ny Eufaula Lake?
Valiny Karen: “Ny tranon'i Belle dia akaikin'ny Farihin'i Eufaula sy ny tohodrano. Belle dia niantsena tany Eufaula im-betsaka.
Fihetseham-piainana teo aloha: Maty i Karen teo amin'ny toerana izay namonoana an'i Belle Starr
“Niverina niverina tany amin'ny hotelinay izahay tamin'ny farany, nefa nandeha tamin'ny làlana izay any ampitan'ny renirano. Rehefa tonga teo amin'ny toerana iray izay nifanatrika na dia ilay toerana teny ampitan'ny renirano izay nahatsapako ho narary aza aho dia nanomboka narary indray. Tsy andriko ny nivoahana tamin'izany faritra izany. Nalahelo sy kivy be koa aho. ”
Fanontanin'i Walter: ”Misy antony ve ianao hahatsapa aretina amin'ity toerana faharoa ity? Nahoana araka ny eritreritrao no nahatsapa alahelo sy fahaketrahana ianao? ”
Valiny Karen: "Hitako hatramin'ny diany fa teny amin'io làlana io no namonoana an'i Belle."
Reincarnation & Fisehoana Mitovy amin'izany: Tsapan'i Mike fa i Karen dia manolo-tena an'i Belle Starr
“Nandeha nijery izahay teny an-dàlana ho any Missouri Fort Gibson, izay efa nisy toby tao amin'io faritra io nandritra ny taona 150. Nahatsiaro tena ho ahy izany. Nankany Missouri izahay ary nijanona Carthage ho an'ny sakafo antoandro. Nandeha lavitra izahay. Carthage no tanàna homena an'i Belle Starr.
Nijanona tao amin'ny tranom-bakoky ny tanàna izahay ary nahaliana azy rehetra. Nahita ny sarin'i Belle Starr ny vadiko talohako. Nanatona ahy izy ary niteny hoe:
'Heveriko fa tokony hahita an'io ianao.' Rehefa nijery ilay sary hoy aho ny vadiko; 'Mitovy ny maso sy ny vavanao.' Tena nampihetsi-po ahy izany. ”
Rehefa 46 taona i Karen, dia niantso azy tsy fantatra ny reniny tamin'ny anaram-piainana taloha, ny anaram-bosotra Belle Starr, "Mey"
'Tamin'ny 2004, ny ray aman-dreniko dia nitsidika anay avy tany Arizona. Izahay sy ny reniko dia nizara lahateny momba ny zavatra ara-panahy foana. Indray maraina nandritra ny iray tamin'ireo resadresaka nifanaovana ireo dia nilaza zavatra izay tena hafahafa ny reniko. Tao amin'ny efitranoko aho izay namirapiratra be, satria tsy tiako ny hanana trano maizina. Tiako ny masoandro hamirapiratra sy hanazava ny efitrano. Nanelingelina azy ny taratra ka nangataka ahy izy hanidy ny varavarankely ao amin'ny efitrano raha mbola miresaka izahay. Hoy izy:
'Mey, azafady, hakatonao ny vavahady; ny efitra dia mazava loatra amiko. '
Nitsangana avy hatrany aho ary nanidy azy ireo, saingy tsapako fa niantso ahy hoe 'Mey' izy.
Rehefa nipetraka aho dia nilaza ny reniko, 'Karen, tsy fantatro ny antony niantsoako anao hoe, hafahafa izany.'
Nolazaiko azy hoe: 'Neny – izany no solon'anarako teo amin'ny fiainako hoe Belle Starr'.
Fotoana hafahafa izany. Ny reniko dia tsy nahalala na inona na inona momba an'i Belle afa-tsy ny hoe mpandika lalàna izy. Nomeko boky ny reniko ho entiko mody ary momba an'i Belle. Mino aho fa ny reniko tamin'ity fiainako ity dia reniko tamin'ny fahavelomako ihany koa tamin'ny naha Belle ahy, noho izany ny reniko dia mety tsy nahatadidy fahatsiarovana tsy nahatsiaro tena hatramin'ny taloha. ”
Fanontanin'i Walter: "Nandà manokana ny famakiana momba an'i Belle ve ny reninao taloha? Nandà ve izy fa tsy fantany fa ny anaram-bosotra Belle dia Belle? Azonao antoka ve fa tsy nilaza tamin'ny reninao hoe May ianao?
Valin'i Karen: "Ie, nandà ny famakian-javatra momba an'i Belle Starr ny reniko. Ny fahalalako azy dia tsy tiany ny zava-misy fa mety ho Belle Starr aho. Tsy tiany ny zavatra mifandraika amin'ny Wild West ary indrindra ny vehivavy iray mety ho jiolahin-tsambo. Mino azy aho satria ny fahaizany mamaky dia tantaram-piainan'i Hollywood, tantara an-tsokosoko ary tantara an-tsokosoko.
Tsy nilaza taminy momba ny solon'anarana Mey mihitsy aho. Izaho manokana dia tsy nahalala izany raha tsy tamin'ny 2003. Ny boky rehetra novakiako talohan'io dia niantso ny solon'anarana Starr hoe Belle.
Raha niresaka tamin'io fotoana io izaho sy Neny dia toa reraka izy. Nirotsaka an-tsehatra ny reniko ary tsy natory. Tamin'izay izy dia nangataka ahy mba hanakatona ireo jamba ary niantso ahy izy hoe 'May.' Nodimandry tao amin'ny 2005 ny reniko sy ny raiko.
Ny fitoviana amin'ny toetran'ny olona & ny fisaintsainan'i Karen momba ny fiainany taloha toa an'i Belle Starr
“Mahaliana ahy ny nahaterahako tany Missouri tamin'ity fiainana ity, toy ny tamin'ny lasa. Tena tiako soavaly soavaly aho ary tsy te hanana basy, nefa fantatro fa tsy hividy izany mihitsy aho. Belle, mazava ho azy, dia vehivavy soavaly tena mahay sy mahay basy. Fony mbola kely aho dia efa nieritreritra foana fa toerana ratsy i Kansas saingy tsy fantatro hoe nahoana aho no nahatsapa izany.
Tao anatin'ity fiainana ity dia tombony goavana aho ary toy izany koa i Belle. Hiady amin'ireo izay nanohitra ahy aho ary i Belle dia toy ny zaza.
Araka ny nomarihina, mino mafy aho fa i Eddie, zanako lahimatoa, dia i Eddie tamin'ny farany ary i Pearl zanakavavy dia i Melissa. Mitovy be toa an'i Pearl izy. Hitan'i Melissa aza ny fitoviana.
Ny ray aman-dreniko dia ray aman-dreny ihany, satria nanonofy azy ireo aho ary izy ireo dia mitovy. Ny rahalahiko dia i Jim Reed. Ny ray aman-dreniko no tena nanandrana azy. Angamba izy ireo nanamboatra ny fomba nahatsapany azy tamin'ny fiainany taloha.
Fantatro fa tsy tiako ny fiainako nandritra ny androm-piainan'i Belle ary tsapako ny fanahiko dia vonona ny hiala amin'izany fiainana izany tamin'ny fotoana nanaovany izany. Fantatro tsara izao ny zavatra ataoko ankehitriny ary ny fomba fijeriko amin'ny olon-kafa amin'izao fiainana izao.
Tsy te hanao ny fahadisoana nataoko taloha aho. Mino aho fa manana izany rehetra izany isika a drafitra momba ny zavatra ilaintsika hanatanterahana eto an-tany. Ny lesoko amin'ity indray mitoraka ity dia momba ny fianakaviana, mba hampidirina bebe kokoa amin'ny olon-kafa ary hampamirapiratra ny olon-kafa. Heveriko ihany koa fa ity drafitra / drafitra ity dia ahitana izay ananantsika eo amin'ny fiainantsika sy ny isan'ireo zaza ananantsika. ”
Fanontanin'i Walter: ”Tianao ny milalao golf. Tsara fitifirana ve ianao amin'ny golf, toa an'i Belle izay voatifitra tamin'ny basy? ”
Valiny Karen: “Eny, manana swing milay aho. Mandeha lavitra be aho (ho an'ny vehivavy). ”
Ny fiainana taloha Karma ho toy ny fandroahana
Ity tranga ity dia manome fotoana hahalalana bebe kokoa ny karma, ny talen'ny hetsika rehetra izay manana fihetsika mitovy na vokany. Karma dia horesahina amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny fizarana Soul Evolution. Heverina fa azo atao amin'ny fomba roa ny karma. Ny fanahy tsy matotra, izay tsy miaiky ny tsy nety natao dia mety mila miaina mivantana ireo lesoka ireo. Amin'izany fomba izany, ny karma dia miasa amin'ny fomba "maso solon'ny maso".
Ny fanahy matotra kokoa, eo anelanelan'ny androm-piainany, dia miaiky ny fahadisoana natao sy nokasaina hatao mba hanonerana ny asa ratsy amin'ny alalan'ny asa fanompoana tsara.
Amin'ity karazana tranga ity dia i Karen no Belle Starr, ary ny vadiny, Mike, ary ny rahalahiny dia ireo Cole Younger sy ilay Gangster Younger. Ao amin'ny nofo nofo misy azy ireo ankehitriny, izy efatra mianadahy ireo dia eo amin'ny sehatry ny asa fanompoana. Araka ny nomarihina, Mike, izay nitarika ny Younger Gang ho Cole, dia naneho ny fahaiza-mitarika indray amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho mpitsabo mpanampy ICU. Ny iray amin'ireo rahalahiny dia talen'ny manam-pahefana ara-bola ao amin'ny vondrona dokotera ary ny rahalahiny iray kosa dia mpamono afo.
Amin'ny fiverenana indray amin'ny fiantsenana amin'ny asa fanompoana, dia manolo-kevitra fa i Karen, i Mike sy ny rahalahiny dia mifandray amin'ny karma izay niasa nandritra ny androm-piainany tamin'ny fomba fiaina mahavariana. Raha tokony hampiasa herisetra atao amin'ny olona, ​​Belle Starr sy ny Younger Gang, amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny fahaiza-manaony hamonjena aina. Manoloana ny voka-dratsin'ny "maso ho an'ny maso", dia miasa amin'ny karma izy ireo tamin'ny fiainany teo aloha tamin'ny alàlan'ny asa fanompoana.
Araka ny nomarihina teo aloha, ny tanjaky ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia miankina amin'ny fahatsiarovan'i Karen tamin'ny an-tsipiriany ny fiainany taloha izay noporofoina tamin'ny tantaram-piainan'i Belle Starr. Raha ekena ity tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ity, dia manaraka ireto manaraka ireto:
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nataon'i Karen fifanarahana mifandraika amin'ny raharahany ny fiainany taloha:
Belle Starr | Karen Pigott
Cole Younger | Mike Pigott
Younger Brothers | Ireo rahalahin'i Mike Pigott
Eddie, zanaka Belle | Mike Pigott, Jr. zanak'i Karen sy Mike
Pearl Starr, zanakavavin'i Belle Starr | Melissa Pigott, zanakavavin'i Karen sy Mike
Jim Reed, lahimatoan'i Belle | Rob, Karen's Brother
Jim July Starr | Ny dadan'i Karen Floyd
Ny zava-dehibe indrindra, ny fitiavan'i Karen tamin'ny androm-piainany taloha, Cole Younger, dia tonga nofo indray amin'ny maha-vadin'i Karen an'i Mike. Ho fanampin'izay, ny zanak'i Belle tamin'ny andro lasa, Eddie sy Pearl, dia tonga nofo indray amin'ny maha-zanakalahin'i Karen sy Mike Mike Jr ary Melissa.
Fitoviana ara-batana: Ao amin'ireo lalao naseho etsy ambony, misy ireo fitoviana ara-batana, saingy ny sasany dia matanjaka kokoa noho ny hafa. Ny fahitana ny fitoviana ara-batana matanjaka dia miankina amin'ny fahazoana maka sary ny lohahevitra mitovy amin'izany.
Fahatsiarovana jeografika: Nanana fihetseham-po ara-pihetseham-po sy ara-batana tao amin'ny Farihin'i Eufaula i Karen, toerana izay niainan'ny Belle Star niaina sy nakatona. Nahatsiaro ho marary ara-batana sy tratran'ny aretim-po mahery vaika izy tao amin'ilay toerana namonoana an'i Belle, izay mitovy amin'ny fihetseham-po izay Jeff Keene fony izy nitazona tamim-pahavitrihana ilay toerana saika nahafaty azy nandritra ny androm-piainany taloha tamin'ny ady an-trano tany Antietam. ”
Manamboatra fotoana: Amin'ny maha-zaza an'i Karen dia niteny tamim-bolana tamin'ny reniny fa nifidy azy ireo ho ray aman-dreny talohan'ny nahaterahany izy. Izany koa no nitranga tao amin'ny James Huston Jr. | James Leininger raharaha momba ny fanambadiana. Raha marina fa i Karen, i Mike sy ireo rahalahiny dia nopotehina indray ho mpitsabo mpanampy mba hanamboatra karma amin'ny fomba mahomby, dia ny drafitra momba ny asa no asaina atao amin'izany.
Mitovitovy amin'ny linguistic style: Nofaritan'i Karen fa ny andian-tsoratra nosoratan'i Jim July dia nitovy tamin'ny kabarin'ny dadatoany Floyd, izay nofaritan'i Karen fa ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Jim Jolay. Ny fitoviana amin'ny fomba fiteny dia voarakitra an-tsoratra ao amin'ny John B. Gordon Jeff Keene tranga vaovao momba ny harena voajanahary amin'ny alàlan'ny fanadihadiana ara-pitsipi-pitenenana.
Innate Talents: Belle dia solo-tsaina voatifitra tamin'ny basy sy pistola. Karen dia mpilalao an-tariby tonga lafatra ary manana toetra mampiady, toa an'i Belle.
Fanampiana avy amin'ny fiaraha-monina na amin'ny Fanahy: Rehefa feno dimy taona i Karen dia nahita hazavana nanjelanjelatra teny an-danitra ary nandre feo mekanika izay nilaza taminy fa ny anadahiny eo amin'ny fiainany amin'izao fotoana izao dia ny vadiny teo amin'ny fiainany taloha. Ankoatr'izay, ny feo mekanika dia nilaza taminy fa mpangalatra mitaingin-tsoavaly izy tamin'ny lasa. Taorian'ireny tranga ireny dia nanomboka niaina nofinofy mazava sy tsipiriany i Karen izay nitondra azy tamin'ny farany tamin'ny fotoana niainany toy ny Belle Starr.
Tsy fantatra mazava raha io fisehoan-javatra io dia mampiseho fanahy iray na angamba loharanom-pitaovana ivelany izay nifandray tamin'i Karen. Ireo mpanoratra hafa dia namaritra ny feony mekanika amin'ny maha-solontenan'olon-kafa azy.
Anisan'izany ohatra Jack Sarfatti, PhD, mpitsabo iray niara-niasa tamin'i Gary Zukov Ny Dancing Wu Li Masters, boky momba ny physique quantum. Ao amin'ny lahatsoratry ny gazetiboky Fate April 2000 ao amin'ny gazety Fate, nosoratan'i Preston Dennett, dia nanoritsoritra ny zava-niainany i Sarfatti tamin'ny feo malefaka mozika izay toa naterak'ilay ordinatera teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anatin'ity lahatsoratra ity, Sarfatti dia nitantara:
“Tamin'ny 1952 sy 1953, tamin'izaho 12 na 13 taona teo ho eo, dia naharay antso an-tariby aho… ary nisy feo mihetsika mekanika any amin'ny ilany iray nilaza fa solosaina tao anaty saosisy manidina io. Te hampianatra ahy zavatra izy ireo ary mety ve aho? Safidiko malalaka izany. Vonona ny hampianarina ve aho - hifandray amin'izy ireo? Tsaroako ny mpihorohoro iray niakatra teo amin'ny hazondamosiko, satria hoy aho hoe, 'Hey, rangahy, tena misy io.' Mazava ho azy fa mbola zaza aho… fa hoy aho: 'eny.' ”
Nanohy ny tantara i Dennett: “Nampiaiky volana an'i Sarfatti. Nihazakazaka izy naka ireo namany, ary niara-nivory tao amin'ny efitranony izy ireo, niandry ilay fifandraisana nampanantenaina ho avy. Mampalahelo fa tsy nisy nitranga, ary Sarfatti nihevitra tamin'ny voalohany fa sangisangy azo ampiharina fotsiny. Amin'izao fotoana izao dia mifarana hafahafa ny fitadidiany ny hetsika. Saingy araka ny filazan'ny renin'i Sarfatti, ny antso an-tariby voalohany dia narahina andian-telefaona mitovy amin'izany — samy nanome vaovao tamin'i Sarfatti izay hamela azy mandrakizay izy ireo. Hoy i Sarfatti:
'Nahatadidy tsara an'io zavatra niainako io ny reniko. Hay hadinoko ny ankamaroany. Tena zavatra niseho nandritra ny herinandro maromaro izany. Toa ny zava-nitranga, izay banga tanteraka tamin'ny fahatsiarovako fa tsy avy amin'ny azy, dia ny nandraisako antso an-telefaona, antso an-tariby maro avy tamin'io loharano io ihany. Nilaza ny reniko fa hafahafa be ny nandehandehako. Nanomboka niahiahy momba ahy izy. Farany, indray andro dia noraisiny ny telefaona, ary henony ity solosaina ity. Tadidiny ireo feo…. Hoy izy: 'Avelao irery ny zanako lahy!' Ilay reny jiosy miresaka amin'ilay saucer manidina na inona izy ireo. Ary teo no niafarany. Tsy nahazo antso an-telefaona mihitsy izahay taorian'izay. '”
Ao amin'ny autobiography misy azy, Ny Tantarako, Uri Geller, mahatsikaiky amin'ny fahaiza-manao ara-psikônianina, toy ny sambon-kitroka amin'ny sainy, dia namaritra ihany koa ny fifandraisana amin'ny olon-tsotra hafa izay nanamora ny feon'ny mozika.
Extraterrestrial na ET Contact & Clairvoyant Insights an'i Michael Tamura
Izaho mihitsy, Walter Semkiw MD, dia afaka mizara zava-mitovitovy amin'izany. Nandritra ny fihaonam-be tamin'ny resadresaka taloha tao Colorado Springs tao 2006 aho. Vao nahita aho Barbro Karlen Omeo famelabelarana momba ny fahatsiarovany ny fiainan'i Anne Frank. Nampihetsi-po ahy ny kabariny ary nieritreritra ny fomba tokony hampisehoany ny horonan-tsary mba hahazoana fidirana bebe kokoa. Avy eo dia namokatra horonan-tsary an'i Barbro aho, izay nasongadina tao Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao.
Taorian'ny fampisehoana nataon'i Barbro dia nandeha nidina ny lalantsara aho ary nihaona Jeff Keene, izay nanatrika ny fihaonambe ihany koa. Raha niresaka tamin'i Jeff aho, ny feoko manokana dia nanana feo mahagaga. Tamin'izay fotoana izay ihany, nahatsapa tsindry ahy teo amin'ny lafiny ankavanan'ny tarehiko aho. Nieritreritra aho fa tena hafahafa izany, toy ny mbola tsy nahenoako ny feon'ny mozika teo aloha, ary tsy nahatsapa izany aho hatramin'izao. Tohina ihany koa ny fahatsapana ny tsindry eo amin'ny ilany havia amin'ny tarehiko, izay tsy mbola niseho teo aloha, ary mbola tsy nitranga hatramin'izao.
Nijery manodidina aho ary nanamarika fa misy dôty kely eo amboninay ary nolazaiko tamin'ilay dôma ny feon'ny mekanikan'ny feoko, izay noheveriko ho namokatra akony. Etsy ankilany, hitako fa tsy nandre akony aho, maheno ny feoko toa mekanika.
Taorian'izay dia nihaona aho Michael Tamura, mpampianatra ara-panahy iray izay nanazava hatramin'ny fahazazany. Nolazaiko azy ny momba ny traikefa hafahafa nataoko izay nanenoako ny mozika raha niresaka tamin'i Jeff Keene aho.
Nolazain'i Michael tamiko fa ny antony nahatonga ny feoko ho mekanika dia ny zavaboary avy any ivelany izay mihaona amiko, satria liana amin'ny fikarohana momba ny vatana vaovao izy ireo, izay heverin'izy ireo fa dingana lehibe iray amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona. Nolazain'i Michael tamiko ihany koa fa ny extraterrestrials dia nametraka fitaovana mavitrika amin'ny ilany havia amin'ny tavako izay nahafahan'izy ireo nihaino ny resaka nifanaovanay tamin'i Jeff. Ny fitaovana fandikan-teny izay ampiasain'ny extraterrestrials dia nahatonga feo ho mekanika.
Ny nahagaga ahy dia ny tsy nilazako tamin'i Michael ny fahatsapako fa nisy tsindry teo amin'ny lafiny ankavanan'ny tavako, rehefa niseho ny toetrako tamin'ny feoko. Ny fahaizan'i Michael mahatsapa fitaovana iray amin'ny ilany havia amin'ny tavako dia nahatonga ahy hieritreritra fa mety ho marina ny fanazavany.
Ny tenako dia tsy mahay mandanjalanja ary tsy nanana traikefa hafa mety hitranga amin'ny extraterrestrials, fa ny fahitan'i Michael ny fametahana angovo eo amin'ny ilany havia amin'ny tavako dia nifanaraka tanteraka tamin'ny fahatsapana nananako rehefa niresaka tamin'i Jeff Keene aho. Fantatro amin'ny mpamaky antonony, ity zavatra niainako ity dia tokony ho mafy tokoa ny hino azy, saingy nitranga izany.
Ny zavatra niainako, ny tantaram-pianakavian'i Jack Sarfatti tamin'ny fahazazany sy ny tantaran'i Uri Geller dia manohana fa ny zavatra niainan'i Karen tamina feon-kira miloko hafahafa dia tsy miavaka. Betsaka ny tranga voarakitra an-tsoratra ao ny fandraisana anjara amin'ny fanahy dia voamarik'ireo tranga tany am-boalohany. Azo atao koa ny manampy ny fanahin'ny vatana vaovao sy ny fiainany taloha, ankoatra ny fanahy.